'အချစ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးထက်ပိုကြီးလိမ့်မယ်' - CORNELL ၏ HOMECOMING ဖျော်ဖြေပွဲတွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို FOSTER THE PEOPLE ကပြောကြားခဲ့သည် - နှုန်းထားများ
'အချစ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးထက်ပိုကြီးလိမ့်မယ်' - Cornell ၏ Homecoming ဖျော်ဖြေပွဲတွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုပြည်သူလူထုကပြောဆိုခဲ့သည်
၂ နှစ်တာကာလပြီးနောက် Cornell ၏ Homecoming ဖျော်ဖြေပွဲပြန်လာသည်။ ကော်နဲလ်ဖျော်ဖြေပွဲကော်မရှင်သည်ပြီးခဲ့သည့်လကကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Foster The People သည် Barton ခန်းမ၌ ၂၀၁၇ အိမ်ပြန်ပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၁ Billboard Top 100 hit Pumped Up Kicks လူသိများပေမယ့်မကြာသေးမီကသူတို့ရဲ့တတိယမြောက်အယ်လ်ဘမ် Sacred Hearts Club ကိုဇူလိုင်လမှာဖြုတ်ချလိုက်ပြီးဒီဆောင်း ဦး ရာသီအများစုအတွက်ဒီအယ်လ်ဘမ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြတာပါ။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, Barton ခန်းမနောက်ဆုံးစနေနေ့ရဲ့ဖြစ်ရပ်များအတွက်နေရာသို့ရရန်လိုင်း Statler Drive ကိုဆင်းလမ်းအပေါင်းတို့ကိုဆန့်ခဲ့သည်ထုပ်ပိုးခဲ့သည်!
ချီကာဂိုအခြေစိုက်မြေအောက်ရက်ပ် Towkio ၏အစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည် Drift နှင့် Gang With Me တို့၏ပရိသတ်များနှင့်အတူပဲ့တင်ထပ်နေပြီးပရိသတ်အချို့ကိုပရိသတ်နှင့်အတူအပြီးသတ်ဖျော်ဖြေရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ပရိသတ်တွေထဲကတစ်ယောက်နဲ့မသင့်တော်တဲ့ကခုန်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလုံခြုံရေးကဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
Towkio ကိုအစကနေစပြီး Foster The People ကသူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်ကြာရှည်စွာထားခဲ့သောဖျော်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ရန်ထွက်လာသည်။ အပြင်မှာလိုင်းနဲ့နေခဲ့ရတဲ့နှစ်နာရီကစောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ အဖွဲ့သည်သူတို့၏အယ်လ်ဘမ်သုံးခုစလုံး (Torches, Supermodel နှင့် Sacred Hearts Club) မှလူသိနည်းသောသီချင်းအချို့နှင့်အတူသူတို့၏သီချင်းများကိုတီးခတ်ခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေမှုတစ်လျှောက်တွင်အဓိကအဆိုတော် Mark Foster သည်လူအုပ်၏စွမ်းအင်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ သူ၏အကအခုန်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လူစုလူဝေးအချို့ကိုသီချင်းအချို့တွင်သီဆိုရန်အားပေးခြင်း။ သူတို့က Blitzkrieg Bop ကို Ramones မှဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး Hey! အို! သွားကြရအောင်! တစ်ခုလုံးကိုနေရာအနှံ့ reverberated ။
Mark Foster သည်အခြားသူများအားသနားကြင်နာမှုရှိခြင်းနှင့်ပါတီများ၏နိုင်ငံရေးသက်တမ်းအတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းရှိခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုအလေးပေးဖော်ပြသည့်သီချင်းများအကြားအတိုချုပ်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ Barton ခန်းမရှိခန်းမရှိလူများအားသူ၏စကားများသည်အစွမ်းထက်။ သက်ဆိုင်သည်။
ဝမ်းမြောက်ခြင်းစိတ်ဓာတ်သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုကာကွယ်သည့်အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုစံချိန်တင် (Sacred Hearts Club) ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လက်နက်အဖြစ်ရေးသားရန်အရေးကြီးသည်။ ဂီတသည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရကမ္ဘာပေါ်တွင်စည်းလုံးမှုအရှိဆုံးအရာဖြစ်လာပြီးအချစ်သည်နိုင်ငံရေးထက် ပို၍ ကြီးလိမ့်မည်ဟုအမြဲသတိရပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် Foster The People သည် Ithaca အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွက်အံ့အားသင့်ဖွယ်ပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခေါက်တွင်ထိုဒေသ၌တိုက်ရိုက်ပြသမည့်သူများကိုစစ်ဆေးရန်သွားရန်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စည်းလုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏အပြုသဘောဆောင်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ သူတို့၏မွန်မြတ်သောစာသားများနှင့်ကူးစက်ရောဂါများသည်အသက်အရွယ်မရွေးလူတိုင်းကိုအတူတကွစုစည်းရန်၊ သူတို့၏သီချင်းများနှင့်အတူသီဆိုရန်နှင့်သီဆိုရန်ဖြစ်သည်။